Izingane Elektromototsikl - amaloli wesithuthuthu encane
Sezadlula lezo nsuku lapho zonke izingane egcekeni kwadingeka ibhayisikili like ezimbili amathonsi amanzi awakhuphule efanayo kumngane ibhayisikili. Esikhathini sethu ezitolo kunezinhlobo eziningi ezahlukene zokuthutha izingane: kusukela ibhayisikili nge isibambo elektromototsikl yakamuva.
Abaningi bakholelwa ukuthi elektromototsikl enjalo (izingane) - kuba ukuthengwa ebiza kakhulu, kodwa empeleni lokho intengo yale ibhayisikili akuyona kunalelo izindleko ibhayisikili ezivamile. Zonke izingane zithande ukulingisa abantu abadala, ngakho imoto okukhulunywa bayothanda ke. Ngokokuqala ngqá e-isondo ingane ikani futhi esemncane: kukhona ngamabhayisikili anamasondo amathathu ekhethekile (izingane elektromototsikly elinamasondo amathathu ubukhulu ilingana), okuyinto zenzelwe izingane ezineminyaka engu-2 kuya ku-5.
Ngamabhayisikili anamasondo amathathu kalula ukumelana isisindo kwengane 25 kg. Lokhu uhlobo isithuthuthu, naphezu usayizi amancane fragility sobala, has a ukumelana okuhle. Ukuze izingane ezindadlana kukhona izimoto naphakathi, okuyinto eyenzelwe izingane iminyaka emithathu. izingane esikhulu kakhulu elektromototsikly ekhiqizwa izingane kusukela eminyakeni emi-3 kuya kwezingu-8 ubudala futhi kalula ukumelana imithwalo kuze kufinyelele 35 - 40 kilograms.
Okuxubile emabhayisikili enjalo nesivinini nemingcele. Amamodeli for abancane ongafinyelela ngesivinini afinyelela ku-4 km / h, izithuthuthu izingane ezindala - kuze kufinyelele 9.3 km / h. isici wathi kuncike umthamo webhethri. Ngakho, ijubane imodeli ne amandla webhethri ka 6 volts (Umnotho samuntu) zizoba ngaphansi kunobukaJohane isithuthuthu ngebhethri 12 volts. Ngaphezu kwalokho, emabhayisikili ezibizayo nethuba ukuhamba ezindaweni ezimbi ngaphandle kwezinkinga, imodeli encane efanayo abakwazi.
izingane Elektromototsikl - ithoyizi omkhulu, okuyinto kungaletha injabulo hhayi kuphela abafana. Okwamanje, cishe zonke izinkampani abathintekayo emsebenzini wokukhiqiza emabhayisikili zezingane, babe arsenal yabo njengesibonelo jikelele, kanye imodeli eyenzelwe ubulili wengane. ngokuvamile izindaba mantombazane elikhanyayo umbala pink kanye nesakhiwo ngomusa ngaphezulu. Ukubukeka imodeli intandane zifana imoto khona abadala. Cishe zonke izingane elektromototsikl ifakwe izibani akhazimula, ukuthungela inkinobho futhi dummies ngesikhathi isitshalo ihlaba umkhosi ibhayisikili samanje.
Njalo okhathalelayo liyadingeka ngokuzibuza: "Ingabe lo akuyena yini lo msebenzi oyingozi?" Ukuze ukhathazeke Akuwufaneli ke: zonke izingane elektromototsikly ifakwe kakhulu futhi, okubaluleke kakhulu, kungase kutholakale othomathikhi unyathela amabhuleki izinhlelo. Leli bhokisi eyizingqabavu ivikela umntwana e ukungqubuzana noma yiziphi izithiyo, futhi esakhelwe ukushaqeka wezinciphisi nokunciphisa amaphutha imigwaqo Russian. Kodwa, naphezu kwalokhu, wena kumelwe kugqoke lonke ingane igiya zokuzivikela, okungukuthi nangesigqoko, nedolo indololwane pads, okumele njalo ihambisane ngesithuthuthu uthenge. Uma ufuna ukulawula ukuhamba ingane, okungukuthi, onobuhle ifakwe elawulwa kude uhlelo. Ngakho kusukela osekushiwo ukuthi elektromototsikl izingane - isipho omkhulu enganeni asebenzayo.
Lokho ukunikeza izingane ukhwehlela: imithi kanye zokupheka of imithi yendabuko
Umklami Sluban: ukubuyekezwa. Imidwebo kanye nemiyalelo inhlangano Sluban nabaqambi
Nezimfumbe ngezilwane zasendle njengoba ithuba uwakhumbule
Ukondla izingane ngemva konyaka kuba wehlukile
Lapho ikhandlela enganeni imfiva
Grabtsevo Airport Kaluga: incazelo, izithombe, oxhumana nabo kanye nokubuyekeza
Izakhiwo ewusizo litchi - Isithelo exotic kusukela ezishisayo
Ukuze ufunde indlela thunga paetki
Ophahleni Mirrored: isithombe. Mirror okwesikhashana ophahleni. Uphahla lwangaphakathi Mirrored egumbini lokugezela
Ancient Egypt. Unyaka ka kumiswa isimo esisodwa Egypt
Esikhwameni for girls crocheted. Eshukunyiswe imisebenzi Vendula Maderski
Umzimba sokulungisa ngoba ukuma ekhaya
Ayengobani Aryans? Isiko, ulimi
Ukusebenza engcono eMoscow: simo
Indlela ukubiza intombazane owazalwa ngo-September? Amathiphu ambalwa
Kuyini ukuncipha? Lisho ukuthini lucebe